Hery Rajaonarimampianina : “Velona ary manana ny maha izy azy ny tafika malagasy” -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : “Velona ary manana ny maha izy azy ny tafika malagasy”
19/08/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy am-pihambahambana no nanambaran’ny Filoham-pirenena sady Filoha faratampon’ny tafika malagasy, Hery Rajaonarimampianina, nandritra ny lahateny nataony tamin’ny fanakatonana ny Fanazarantena miaramila “Tintôtry 2017” teny amin’ny toby miaramila, Hery Vondron’ny Tafika, teny Tamponketsa fa “velona ary manana ny maha izy azy ny tafika malagasy”. Marihina fa midika ho fifohazana sy fahatongavan-tsaina ny “Tintôtry”.
“Na dia efa resy lahatra àry aho hatramin’izay, mila mahita tafondro mipoaka ary izay indrindra no tena manamarina fa tena “Tintôtry” tokoa ny tafika sy ny miaramila malagasy”, hoy hatrany ny Filohan’ny Repoblika.
Tamin’izany koa no nanomezany hafatra fohy ho an’ireo mpandrabiraby ny tafika malagasy sy ny fitaovana ampiasainy sy ananany. “Rabirabian’ny olona isika amin’ireny Fetin’ny 26 jona ireny fa toa fampisehoana fotsiny ihany. Voaporofo izy androany fa tena mahafaty ary mandratra ireo fitaovam-piadiana mavesatra hampisehoana eny Mahamasina amin’ny Fetin’ny Fahaleovantena fa soa ihany fa tsy natao hatodika any amin’ny vahoaka izy ireny fa fitaovana hiarovana azy sy ny firenena”, hoy izy nanamafy.
Ankoatra izay, nambarany fa afaka miaro ny vahoaka ary “Tandroka aron’ny vozona” tokoa ny tafika malagasy. “Mankasitraka sy misaotra anareo aho nahatontosa an-tsakany sy an-davany iny fanazarantena sy sarin’ady iny. Hay tahaka ireny no ataon’ny tafika rehefa miaro ny vahoaka sy firenena izy. Zavatra goavana izany. Hinoako fa hahazo angovo vaovao ianareo hoentinareo miatrika ny asanareo sy ny adidinareo”, hoy ny Filoham-pirenena.
Tetsy andaniny, nanolotra fitaovana ho an’ny tafika malagasy ihany koa ny Filohan’ny Repoblika. Araka izany, natolotra ary avy hatrany dia nanaovana fanazarantena ireo fitaovana vaovao toa ny “Buggy”, “Quad” ary “Drone” hiaka farany. Ilaina amin’ny asan’ny tafika malagasy ireo fitaovana ireo raha ny voalaza.
Tsy vitan’izay fa nambaran’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina koa fa hiezaka araka izay azo atao ny Fitondram-panjakana izay tarihiny amin’ny fampitaovana ny tafika, zandarimaria ary polisim-pirenena. “Hitondra fitaovana maoderina sy vaovao ho anareo izahay. Ilaintsika izany saingy tsy ho vita ao anatin’ny iray andro kosa anefa izany. Efa nanomboka isika ary hotohizana izany. Hohatsaraina hatrany ireny fitaovana ireny”, hoy izy.
Ankoatra izay, nampanantena ny Filohan’ny Repoblika fa hanampy ireo fitaovana efa natolotra ireo amin’ity taona 2017 ity. “Azo ampiasaina amina toerana maro samihafa ireo fitaovana vaovao ireo satria ilaina amin’ny hanatanterahana ny asa antsakany sy andavany sy ny iraka izay ataon’ny tafika malagasy izany”, hoy ny Filoha.
Taorian’ny korontana sy savorovoro ka namoizana ain’olona sy nandratrana ny mpiray tanindrazana, ny sabotsy 21 aprily teo, tetsy Analakely, dia nanao fanambarana ho an’ny vahoaka malagasy ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimpianina, omaly, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha. ...Tohiny